Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Waxyaalaha looga hortago duqowga degdega ah (essentials for anti-aging processes)
Waxyaalaha looga hortago duqowga degdega ah (essentials for anti-aging processes)
November 14, 2011 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Talo-bixinta loogu talogalay bulshda oo dhan, siiba kuwa marwalba si joogta ah u booqda Dr. Rashid Clinic, Jigjiga (This important flyer is intended to become use full for the whole people, particularly for the regular visitors of Dr. Rashid Clinic, Jigjiga).
Dr. Rashid A. wali Qassim iyo Prof. Mohamed Mirad Leyli
Cuntada muhiimka ah ee cimri-dheerar keenta iyo Deegaanka iyo Guriga waxyeellada ama caafimaadka ay u keenaan bulshada:
Qaado maalinkasta ugu badnaan 75 mg oo aspirin ah cuntada kadib, wuxuu ka hortagi cudurrada dilaaga ah ee la dhaho: Kansar ”cancer”, wadna xanuun ”illness of heart” iyo dhiig-karka ”hyper-tension—blood pressure” (take daily 2 baby aspirin, maximum 75 mg after meal).
Qaado maalinkasta hal kaniini oo vitamin ah cuntada kadib, sida superdin oo kale(take daily multi-vitamin tablet, like superdin, during or after heavy meal).
Inta badanaa cun qudaarta iyo midhaha cagaarka ama jaallaha ah, sida mooska, qaraha, babaayga, saytuunka, tamaadhada, shaaha cagaarka ah, canabka, tufaaxa, dadka aad u beerta tufaaxa waxay dhahaan “an apple a day keeps the doctor away”, iwm..(all anti-oxidants are important to eat).
Shokulaatada waa muhiim oo waxay yaraysaa walwalka iyo fikirka badan(chocolate reduces stresses).
Duray ama hargab markuu kugu dhaco malab, liin iyo olive-oil ama gabal-daye (sunflower oil) iskudar oo cab(any time you’ve severe cold mix the honey, lemon and olive-oil or sunflower oil together and drink smoothly).
Marka uu hargab xun ku hayo ku luqluqo adigoo iskudaraya basbaas, malab iyo liin. Markiiba waad caafimaadi(if you’ve cold gurgle with mixed lemon, honey and hot chilly).
Malabka cunistiisa ama ismarinta jidhka wuxuu ka hortagi, faafista infection kasta ( if you rub the honey on the infection area, it’s going to heal, at the same time you can use it as a body cream for your health).
Cunista baradhada waa muhiim oo waxay kaydisaa vitamin B12, waxayna ka qayb qaadata samayska dhiiga gaduudan( potato enriches vitamin B12 and generates the red blood cells).
Cunista basasha iyo toonta waa muhiim. Labaduba dhiiga ayay sifeeyaan(eating onion and garlic is very use full, since they clean the blood).
Saliidaha muhiimka ah ee la cuno oo adduunka laga jecelyahay caafimaad badanna leh waa kuwa loo yaqaano “gabbal-dayaha”(sunflower oil), “olive oil” iyo macsarada(use always the following oil to eat, like sunflower oil, sesame oil and olive oil).
Waxaa kale oo saliidahan gabbal-dayaha(sunflower oil), olive oil iyo macsarada loo isticmaalaa jidhka, si uu jidhku u qurux badnaado una nuuro. Waana qayb kamid ah la dagaallanka duqowga( all above mentioned oils are also very use full for our body, just use them as body-cream, if you can afford it).
Noockasta oo Basbaas ama toonta ah, sida sanjibiil, xawaash (qurfo iyo hayl), curry, cumin, chilly, pepper, mustard, iwm.. waxay ka hortagaan kansarka, dhiiga ayay daryeelaan, waxaa laga helaa vitamin nooca ‘B’, waxay daweeyaan cudurka illawshaha ama loo yaqaan “Alzheimer”(all spices, like ginger, garlic, curry, cumin, chilly, pepper, mustard are good for: anti-cancer, cleaning the blood, containing vitamins group ‘B’ ).
Cuntada muhiimka ah ee gaska leh oo marwalba loo baahanyahay in la cuno lagana helo waxa loo yaqaano “food contained fiber ” oo qofkii marwalba cuna caafimaad badan ka heli waa kuwan:
Digirta, looska, fasooliya, iwm..(Beans, bees, oats, white beans, etc.)
Hadhuudhka(masago yarey), gallayda(soorta ama shuurada) ama ingiriis lagu dhaho(sorghum, maize, etc..)
caanaha iyo waxa laga sameeyo, sida jiiska, yogorta, iwm..(milk and bi-products of milk, like cheese, yoghurt, etc..)
digaaga iyo ukunta cunistooda waa laga maarmaan(chicken and egg are very useful for our body).
hilibka mallayga oo leh waxa loo yaqaan “omega/3”. Waliba mallayga laga helo wabiga ama biyaha macaan qofkii badi cuna kuma dhaco ruuxaasi cudurka kaneecada ama loo yaqaano malaariya, marka cuniddiisa waa difaac oo ka hortag ah, sida tallaalka oo kale. Cunista mallayga noockasta ha noqdee waxaa laga helaa vitamin A and D wuxuuna yareeyaa fikirka iyo walwalka badan (eating fish, particularly fresh water fish, is very healthy and you’ll not get malaria. Every fish contains vitamin A and D and reduces stresses).
Bariiska aan caddayn cunistiisa waa muhiim oo wuu vitamin badan yahay (eating brown rice contains more vitamin than others).
sideed saacadood oo la seexdo waa nasasho marwalba loo baahanyahay, cimri dheerarna keenta(8hrs are needed to sleep, it means you’ll have more rest and be healthier).
shantii maalmoodba ugu yaraan 30 daqiiqo oo jimicsi ah, ha noqoto orod gaaban, dabbaalasho, socod dheer, wadidda buskuleeti, iwm.., ayaa loo baahanyahay( 30 minuets exercises within 5 days a week are needed, like jogging, swimming, biking, walking, etc.).
Galmada labada isqabta oo la badiyo lana gaadhsiiyo ugu yaraan 4 jeer todobaadkii, kadib caafimaadka labada isqabta wuu kordhi(the partner needs to do more intercourse at least 4 times a week. This sex activities make the partner more healthier).
Nadaafada guriga waa muhiim oo loo baahanyahay in marwalba la xaaqo lana dhaqo(the house must always be cleaned).
Guriga dadka ku nool waa inay tiradooda yaraato, maadaama gurigu hadduu buuxsamo cudurro badan la isqaadsiin karo, sida qaaxada, hargabka, iwm..siiba caruurta ayaa u daran (over crowded house is very dangerous for the health, particularly for the children).
Dadka guriga ku nool waa inay marwalba qabaystaan,ilkahana rumaydaan, siiba caruurta nadaafad xoog leh ayay u baahanyihiin, maadaama ay marwlba wasakhda dhaxgalaan(the house- hold must always clean themselves, specially the children must be cared smoothly).
Waxyaalaha guriga lagu isticmaalo, sida sigaarka, shiishada, jaadka, iwm.., aad ayay caafimaadka wax u dhimaan, siiba caruurta way u darantahay. Guriga la daggan yahay ee habeenkii la seexdo waa mamnuuc caafimaad ahaan in waxyaalahaas oo kale loo isticmaalo(smoking cigarettes, shisha and narcotics in the house is forbidden).
Si uu reerku maskaxiyan u dago, cimri-dheerarna u helo, waxaa fiican in ay caruurtu saddex ka badnaanin, sababtuna caruurta badan waxay waalidka u keenaan fikir badan, xanaaq badan, dagaal joogta ah labada isqabta. Caruurta markay yaryihiin waxay waalidka u sahli inay ka adkaadaan nadaafadooda, waxbaristooda, tallaalkooda ama caafimaadkooda, edebtooda, dhaqaalayntooda iyo korintooda guudba. Waxaa waalidka ka yaraan fikirka, walwalka iyo madax-xanuunka badan. Noolal qabow oo jacayl ku jiro ayay caruurta iyo waalidkaba ku noolaan(not more than three children are recommended, in order to reduce all kind of stresses).
Waxyaalaha duqowga degdega ah yareeya waxaa kamid ah guriga aad ku nooshahay oo cagaaran. Waxaad ku beeri guriga dhexdiisa dhir, doog iyo ubax, midhaha(moos, babaay, iwm..) iyo qudaarta(tamaadho, basal,iwm..). Cagaarku wuxuu u roonyahay indhaha, maskaxda iyo jidhka oo dhanba, maadaama dhulkeenu aad u kulul yahay(leaving in a green-house is more healthier than any other).
Duqowga degdega ah waxay aad u saamaysaa dadka kaligood nool. Nasiib wanaag bulshada soomaalida aad ayay noolashaasi ugu yartahay. Kali-noolaashada waxay ku badan tahay waddamada horumaray oo guur iyo caruurba aan rabin.(living alone is very dangerous).
Qaraabada ama saaxiibada badan oo marwalba isbooqda caafimaad badan ayay keentaa. Kulanka qaraabada waxay keentaa farxad iyo qosol, taasina waa ka hortaga fikirka iyo walwalka badan. Arrintan soomaalida qani ayay ku tahay. Dadka arrintan ay aad u saamaysay waa ummdaha horumaray. Baryahan dambe waxaa arrintan ka lacagaystay dadka dunida soo koraysa asalkooda uu yahay oo ku nool dhulkaasi horumaray. Waxaa jira hay’ado badan oo bara dadka ay baahida bulsho hayso sida loo wada dhaqmo, loo wada noolaado, iwm.. Tusaale ahaan waxay baraan sida loo farxi ama loo qosli lahaa iyo sida xidhiidh bulsho loo samaysan lahaa oo qof ama ruux loola sheekaysan lahaa xishood ama cabsi la’aan, iwm..(Coming together and living together are essential for our happy life; extended family specially, brings socialization and happy life for ever).
Waxyaalaha cudurrada badan keena, da’dana yareeya waxaa kamid ah xumaynta deegaanka. Kuwa deegaanka xumeeya ama wasaqeeya waa qiiqa kasoo baxa warshadaha, baabuurta, gaaska shoolada,iwm.. Cudurrada uguwayn ayay keenaan, sida kansarka, iwm.. Nasiib wanaag waddankeena waxyaalahaasi wuu ku yaryahay(environmental pollution is very dangerous for our health; although is it‘s little in our country).
Waxyaalaha aan kor kusoo sheegnay waxaa isku raacay indheer-garadka adduunka oo qofkii sida ay tahay u isticmaala kuna dhaqma wuxuu ka badbaadi ama ka hortagi cudurrada dadka laaya oo dhan, sida kansarka(Cancer), Dhiig-karka( Hypertension—Blood Pressure), wadna-xanuunka(illness of heart), cudurka-sonkorta ee la dhaho Macaanka(Diabetes), Mallaariyada(Malaria), Qaaxada( TB- Tuberculoses), illawshaha badan(Alzheimer—Memory loss), iwm… Waxaan kor kusoo sheegnay oo dhan dhulkeena ayaa laga helaa waana raqiis oo marwalba la gadan ama lagu dhaqmi karo.